ဝိရာမ – မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ
ဘာသရကို သတ်သနည်း? ‘အ’ သရသံကို သတ်ပါသည်။
မည်သည့် ‘အ’သရကို သတ်သနည်း? ဗျည်းအတွင်း တိမ်မြုပ်နေသော ‘အ’ သရကို သတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာအပါအဝင် ဗြဟ္မီပွားအက္ခရာများ၏ ထူးခြားသော ဝိသေသတစ်ခုမှာ ‘အ’ သည် ဗျည်းများအတွင်း တိမ်မြုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ချက်အရ ဗျည်းသည် ကိုယ်ပိုင်အသံ မထုတ်နိုင်၊ သရ တစ်ခုခုနှင့်ပေါင်းမှသာ အသံထွက်နိုင်ပါသည်။ က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င စသော မြန်မာဗျည်းများကို ရွတ်ဆိုကြည့်ပါက အသံပြည့်ထွက်နိုင်သည်ကို တွေ့ရပါမည်။ အကြောင်းမှာ ဗျည်းများ အတွင်း ‘အ’ သရ ပေါင်းစပ်ထားပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဗျည်းအတွင်း တိမ်မြုပ်နေသော ‘အ’သရသံ မပါဘဲ ဗျည်းသက်သက်ပြလိုပါက ဝိရာမ သို့မဟုတ် အသတ်ကိုတင်၍ ပြကြပါသည်။ ဗြဟ္မီပွားအက္ခရာများတွင် ဤကဲ့သို့ တိမ်မြုပ်နေသော ‘အ’သရ ပါရှိကြပါသည်။
‘က’ သည် အမှန်စင်စစ် ‘က်’ဗျည်းနှင့် ‘အ’သရ ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ ဖလှယ်ပါက က=ka ဖြစ်ပြီး က်=k နှင့် အ=aတို့ ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒေဝနာဂရီအက္ခရာတွင် क=က,ka ဖြစ်ပြီး क्=က်,k ဖြစ်သည်။
← Previous Previous post: ပါဌ်ဆင့် အသတ် ကင်းစီး
Next → Next post: ထိုးခြင်း ရစ်ခြင်း